xawaaraha codka hawada
Speed ​​of dhawaaqa in calculator hawada
Calculator xawaaraha codka hawada, xisaab online u ogolaanaya si ay u xisaabiso xawaaraha codka hawada ee heerkulka kala duwan ee unugyada sida kiiloomitir, saacaddii, miles saacadiiba, mitir oo pounds halkii labaad, qanjidhada.
Heerkulka Air in:
mitir / labaad km/h Miles/h cagaha/s Kuus kuus
Xawaaraha ee degganu waa fogaanta u safray halkii mar unit by faafinayeen la ruxruxo dhawaaqa dhex-dhexaad ah laastikada. Waxay ku xiran tahay barti iyo cufnaanta ee dhexdhexaad ah: caadiga ah, xawaaraha codka ee gaaska uu ka yar yahay in cabitaanno ah, iyo in cabitaanno ah - in ka yar ee adkaha.
Speed, waqtiga, fogaanta, xisaab online.
Xisaabinta (online) ee xawaaraha, waqtiga, fogaanta iyo tiirsanaanta u dhaxeeya.
Xawaare Orbital calculator formula
Xisaabi xawaare orbital ee meeraha ah in nidaamka qoraxda, ama jirka weyn leh mass qeexay iyo gacan.
Cararidda calculator formula xawaare
Xisaabi xawaare baxsado of meeraha ah in nidaamka qoraxda, ama jirka weyn leh mass qeexay iyo gacan.